ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ရေးရာစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုစုလွင် ထိုင်းနိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Suchart Tonjaroen အား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ရေးရာစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ (၄၀) ကြိမ် မြောက်အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံသို့ တက်ရောက်မည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုစုလွင် သည် ထိုင်းနိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Suchart Tonjaroen ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ သဘင် ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ- ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ လွှတ်တော်များအချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံပါလီမန် များ အစည်းအဝေး 40th AIPA General Assembly နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ လွှတ်တော်ရေးရာစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုစုလွင် နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်သိန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းဝင်းနှင့်အတူ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဒေါ်ပြုံးကေသီနိုင်၊ ဦးဘိုဘိုဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့် ဦးမောင်မောင်လတ်၊ ဒေါ်နော်လှလှစိုး၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။